E-mail: prorector@myeikuniversity.edu.mm, winwinthan5@gmail.com,
၂၀၀၇ ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ပါရဂူဘွဲ့
၁၉၈၄-၁၉၉၂ ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံဘွဲ့နှင့် မဟာသိပ္ပံဘွဲ့
နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ မှ ယနေ့ထိ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်၊ မြိတ်တက္ကသိုလ်။
ဇူလိုင် ၂၀၁၁ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ ထိ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ တောင်ငူတက္ကသိုလ်။
စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉ မှ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၁ ထိ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ မြိတ်တက္ကသိုလ်။
စက်တင်ဘာ ၂၀၀၅ မှ သြဂုတ်လ ၂၀၀၉ ထိ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ထားဝယ်တက္ကသိုလ်။
စက်တင်ဘာ ၁၉၉၉ မှ မတ်လ ၂၀၀၀ ထိ ကထိက၊ ဗိုလ်တထောင်ကောလိပ်။
ဧပြီ ၂၀၀၀ မှ ဇွန်လ ၂၀၀၀ ထိ ကထိက၊ ရန်ကုန်အ‌ရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်။
ဇူလိုင် ၂၀၀၀ မှ ဇူလိုင်လ ၂၀၀၂ ထိ ကထိက၊ ပုသိမ်တက္ကသိုလ်။
ဇူလိုင် ၂၀၀၂ မှ စက်တင်ဘာလ ၂၀၀၅ ထိ ကထိက၊ ရန်ကုန်အ‌ရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၉၆ မှ စက်တင်ဘာလ ၁၉၉၉ ထိ လ/ထကထိက၊ ဗိုလ်တထောင်ကောလိပ်။
ဇန်နဝါရီရီ ၁၉၉၆ မှ ဇန်နဝါရီလ ၁၉၉၆ ထိ လ/ထကထိက၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။
သြဂုတ်လ ၁၉၉၄ မှ ဇန်နဝါရီလ ၁၉၉၆ ထိ လ/ကထိက၊ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်။
မတ် ၁၉၉၄ မှ သြဂုတ်လ ၁၉၉၄ထိ သရုပ်ပြ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၉၄ မှ မတ်လ၁၉၉၄ထိ သရုပ်ပြ၊ ထားဝယ်တက္ကသိုလ်။
ဇွန် ၁၉၉၃ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၉၄ထိ သရုပ်ပြ၊ မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၆ မှ မေလ ၁၉၉၃ထိ သရုပ်ပြ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။
Fish Species Diversity in Upstream in Upstream and Downstream of Sittaung River, Bago Region, Myanmar, 2020, Page 140-148
Study on Helminth Parasite Syphaciaobuelata Examination in Laboratory mic (Musmusculus). July 2019, Vol. 10 No. 1, Page 114-121
Study on Some Behavioral Patterans and Food Plants of Rhesus Macaque in Phoe Win Mountain, Yin Mar Pin Township Sagaing Region. Myeik Unversity Research Journal, December 2018, Vol. 9, No. 1, Page 111-118
Comparative Study on Chemical Content in Vermicompost by Different Earthworms in Various Organic Waste Materials. Myeik Unversity Research Journal, December 2017, Vol. 8, No. 1, Page 1-12
Survey on the Life Cycle of Bombyx mori analysis Pyin Oo Lwin Township Mandalay Region. Taungoo Unversity Research Journal, March 2017, Vol. 8, No. 1, Page 83-88
Case Study of the Fish Species Abundance in the Sittaung River Segment Between Phyu and Yedashe Township Bago Region and Anthropogenic impactonit. Taungoo Unversity Research Journal, March 2017, Vol. 8, No. 1, Page 193-214
Preliminary surveys on Eld’s Deer, Rucervu eldii, in Chathin Wildiife sanctury, Kanbalu Township Sagaing Region. Taungoo Unversity Research Journal, March 2016, Vol. 7, No. 1, Page 145-152
Study on the occurrence of some flora and fauna in the mangrove of national races village, Yangon Region. Taungoo Unversity Research Journal, March 2016, Vol. 7, No. 1, Page 153-162
Survey on Growth Rate and Healthy weight of Geochelone Polatynota (Blyth, 1563) Burmese Star Tortoise, Kye Leik, Minsontaung Wildlife Sanctuary, Natogyi Township, Mandalay , Third Maynmar Japan International Symposium, Pathein University, Myanmar, December 2016, Page 66
Taxonomic Study on Some Ant Species in Taungoo University Campus, Taungoo University Research Journal, March 2015, Vol.6 No. 1, Page 95-108
Occurrence of Helminths Parasites in Some Bony Fishes of Oder Siluriformes from Mhaw Wan Creek, Yangon Region, March 2015, Vol.6 No. 1, Page 109-120
Fish Species Occurrence along Nga-Moe-Yeik and Pa-Zun-Taung Rivers with Emphasis on Gonad Development of Two Species; Mystus vittatus(Bloch, 1794) and Taenioides buchanani(Day, 1876), December 2012, Vol.4. No.1, Page-123
Current Situation of Pet Monkeys in Myeik and Kyun-Su Township Taninthyi Region, Myeik Unversity Research Journal, December 2010, Vol. 2, No. 1, Page 11-21
သုတေသနနှင့် ပညာရေး လှုပ်ရှားမှုများ
ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၇ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ SEAMEO RIHED မှ ကျင်းပသည့် Experts Meeting for the Academic Credit Transfer for Asia ACTFA
ဇွန်လ ၂၀၁၉ တွင် လာအိုနိုင်ငံ၌ Teaching and Research Capacity Development Workshop II